Alahadin’ny SAF/ FJKM 2019. – FJKM
ALAHADY HITONDRANA AM-BAVAKA NY SAF/FJKM 17 Martsa 2019
Alahady 17 Martsa 2019
MANAMASINA FIAINANA HO AN’NY TOMPO
Salamo 66 :1-4
« Mihobia ho an’Andriamanitra, ry tany rehetra. Mankalazà ny voninahitry ny Anarany .omeo voninahitra Izy ho fiderana Azy . Lazao amin’Andriamanitra hoe : endrey, mahatahotra ny asanao! ny fahalehibiazan’ny herinao no hikoizan’ny fahavalonao Anao.Ny tany rehetra hiankohoka eo anatrehanao ka hankalaza Anao , eny, hankalaza ny anaranao izy. »
Josoa 14: 6 – 15
Matio 5:13 – 16
I Tes 2: 1 – 12
Hira 205 :2,4
Hira 415 :2,3
Isaia 44 :22
“Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho.”. Voavela ny helokareo noho ny Anaran’I Jesoa Kristy. Miderà ny Tompo.
“Sambatra ny olona izay voavela ny helony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’I Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny”. Amen
Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen
RAKITRA SALEMA VAOVAO 67 HA 20 000
RAKITRA AMBOASARY ATSIMO 19 300
RAKITRA BELAVABARY FAHARETANA 13 000
RAKITRA ANOSIZATO HEBRONA 214 300
RAKITRA ALAHADIN’NY SAF FJKM 20 000
RAKITRA FJKM ANKAZOMANGA 10 000
RAKITRA FJKM AMBOHIPOTSY 226 300
RAKITRA FJKM BETSIZARAINA 40 900
RAKITRA FJKM MANDROSOA AMBOHIJ… 94 100
RAKITRA FJKM BETELA MAROBIBY 68 400
RAKITRA FJKM ANONIMASINA ZIONA 73 700
RAKITRA FJKM ANDRAMAHAVOLA 179 570
RAKITRA FJKM AMBODIMITA 52 900
RAKITRA AMPARIHIVATO 15 000
RAKITRA VOHIDIALA 10 000
RAKITRA SOAMONINA FANAVAOZANA 6 370
RAKITRA ANDRANOVELONA FITIAVA… 3 900
RAKITRA ANTANETIBE MAROMBY 2 010
RAKITRA IARINARIVO 7 000
RAKITRA AMBATOMENA 134 750
RAKITRA TRANOVATO FARAVOHITRA 803 000
RAKITRA RANIVO MARITIORA LAZAI… 42 700
RAKITRA ALAHADIN’NY SAF 17 220
RAKITRA FJKM ANDOHATAPENAKA 20 100
RAKITRA FJKM AMBOHIMANDROSO 43 000
RAKITRA FJKM AMBALAVAO ISOTRY 30 000
RAKITRA FJKM ANTANETIBE FITIAV… 10 800
RAKITRA FJKM AMBOHIDROA ANTEHI… 20 000
RAKITRA FJKM ANTANIMAFY FAHAZA… 13 100
RAKITRA FJKM AMPARIBE FAMONJEN… 50 000
RAKITRA FJKM MAHITSY FEHIZORO 15 000
RAKITRA FJKM AMBOHITRINIBE FAH… 29 000
RAKITRA IMERINA IMADY 10 600
RAKITRA AMBALAMANAKANA 4 000
RAKITRA AMBOVOMBE 10 000
RAKITRA AMBAHOMBE 1 800
RAKITRA ANTANIMENA ANDREFANA 360 400
RAKITRA FJKM AMBOHIMANANDRAY 20 000
RAKITRA FJKM AMPERIFERY 7 700
RAKITRA FJKM AMBODIHADY VAOVAO 20 000
RAKITRA FJKM TRANOVATO AMBATON… 100 000
RAKITRA FJKM AMBOHIMIANDRA 100 000
RAKITRA ISOAVINA FIHAVAOZANA 70 520
RAKITRA FJKM MAHITSY FAMONJENA 78 400
RAKITRA AMBOASARY ATSIMO 12 000
RAKITRA FJKM SANGANORO 19 050
RAKITRA FJKM ANKOTROBE 5 000
RAKITRA TSARAZAZA FINOANA 5 900
RAKITRA SP AMBOVOMBE KRISTY RA… 25 000
RAKITRA AMBOHIJAFY FANANTENANA 20 000
RAKITRA ANKAVANDRA 10 200
RAKITRA AMBOHIMIRARY FAHARETAN… 6 000
RAKITRA FJKM FORT- DAUPHIN 20 000
RAKITRA AMBOHIJATOVO FITIAVANA 50 000
RAKITRA AMORON’I MANIA 11 300
RAKITRA FJKM ANDRAIKIBA 13 500
RAKITRA FJKM ANKIRIHIRY 75 000
RAKITRA FJKM TSIROANOMANDIDY 180 000
FJKM AMBOHIMANANDRAY 82 400
Misaotra an’Andriamanitra isika noho izao Alahadin’ny SAF/FJKM izao.
Taom-pankalazana ity taona 2019 ity, satria mandia ny faha 45 taonany izao ny SAF/FJKM. Naorin’ny Fiangonana FJKM tamin’ny taona 1974 izy, araka ny fanapahan-kevitry ny Synoda Lehibe Fahatelo tany Mahajanga ny taona 1972. Lohahevitra tamin’izany ny hoe “Velona ho an’ny hafa” II Kor. 5.15. Teny filamatra entin’ny SAF / FJKM mandraka ankehitriny kosa ny hoe “mitady ny mahasoa ny maro, mba hovonjena izy” I Kor 10:33
Ankehitriny, mananika ny 60 taona ny fahaleovan-tenan’ny firenena Malagasy izay iorenan’ny Fiangonana FJKM kanefa iaraha-mahita ny fahantrana lalina manjo ny vahoaka sy ny fahasimban’ny fiaraha-monina ary ny fahapotehan’ny tontolo iainana. Tsy ho tanisaina ireny.
Miantso mandrakariva ny Tompo; ary ny Fiangonana FJKM araka ny Foto-dalàna sy Fitsipika, dia « ny hijoro ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiaraha-monina. Izany no hanehoany ny maha fanasina azy sy maha fahazavana azy eo anivon’ny voahary manontolo sy izao tontolo izao ».
Manana anjara lehibe ny Fiangonana eo amin’ny fitondrana fiovana eo anivon’ny fiaraha-monina ka hahatonga ny olombelona rehetra hanana ny fahafenoana sy ny fahamendrehana araka izay mety ho tratra, mifanaraka amin’ny namoronan’Andriamanitra azy (Lioka 4 /18-19)
Koa manentana hatrany ny Kristiana FJKM, ny Fitandremana sy ny Synodamparitany hanome talenta hampivelatra hatrany ny asa fampandrosoana entin’ny FJKM amin’ny alàlan’ny firotsahana mivantana eny anivon’ny fiaraha-monina. Misy hatrany ny asa fampivoarana sy fampandrosoana azon’ny Fiangonana tanterahana miaraka amin’ny fiaraha-monina misy azy. Singanina amin’izany ny fampiofanana ilain’ny mpamboly sy mpiompy madinika, ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, indrindra ho an’ny zaza latsaky ny 5 taona, ny fitaizana ara-pahasalamana, ny fanaovana tahiry iombonana ho fiharian-karena na “VOA MAMY”, ny fahadiovana sy fidiovana ary fanadiovana, ny fambolen-kazo.sns…
Fomba fiasa efa nosantarintsika izany, ary velarina hatrany hatrany sy hanaovana antso amin’izao Alahadin’ny SAF/FJKM izao.
Toy izao no fomba fiasa :
Mitarika sy manentana ary manohana amin’ny fanofanana sy fizarana traikefa ny SAF/FJKM
Omena lanja ny fiaraha-miasa amin’ny ambaratonga samihafa eo anivon’ny FJKM sy ireo Sampana sy Sampan’asa ary Asa, fa tsindriana manokana ny AFF sy ny SEFALA ka “fampiofanana miampitapita” no hatao
Omena andraikitra sy hofanina koa ireo Mpilatsaka an-tsitrapo efa najoro (“Volontera FJKM”) any amin’izay toerana efa misy azy ireny. Entanina ny Synodamparitany mbola tsy misy Volontera hifanome tànana amin’ny SAF/FJKM hananganana sy hanofanana azy ireny.
Amin’izao taom-pankalazana ny faha 45 taona nijoroan’ny SAF/FJKM izao dia hisy hetsika maro hanamarihana izany. Koa manentana antsika Synodamparitany, Fitandremana amin’ny fifanohanana..
Antsoina manokana ireo Fiangonana manana fanomezam-pahasoavana amin’ny firotsahana amin’ny asa soa sy fampandrosoana, ny fanànana olona manana traikefa, ny tanjaka ara-bola; mba hahafoy hizara amin’ny Fiangonana sy Synodamparitany amin’ny Faritra sahirana, mba hifanampy ny hery hahazoana vokatra tsara sy malaky kokoa.
Hotanterahina ny faha 29 hatramin’ny 31 Oktobra 2019 ny Komity Foiben’ny SAF/FJKM. Mampahery antsika, ry Havana amin’ny fanatanterahana ny iraky ny Tompo ary mitarika antsika hibanjina hatrany ny fahasoavana sy fahafenoana ao amin’i Jesoa Kristy, fa ao Aminy ihany no hanovozantsika ny hery mba “tsy ho menatra ho vavolombelon’ny Tompo” tokoa isika.
Ho voninahitr’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina irery ihany.
FANTARO NY SAF/FJKM
Ny Synoda Lehibe faha-III tany Mahajanga no nanapaka fa hatsangana ny Sampan’Asa izay tànana sy sandrin’ny Fiangonana hiasa eny amin’ny fiaraha-monina. Teny faneva tamin’izany ny hoe “ Fiangonana velona ho an’ny hafa” (II Kor 5:15).
Ny volana aogositra 1974, taorian’ny Synoda Lehibe faha- IV , no naorina ny “Sampan’Asa momba Fampandrosoana” na «SAF / FJKM » . Teny faneva tamin’izany ny hoe « Tazano ny làlana , hetseho mafy ny herinao » Nah 2 : 2
Ireo fotokevitra nipoiran’ny SAF / FJKM:
“Miara-miasa amin’i Kristy amin’ny fampandrosoana ny firenena”
“Fiangonana velona ho an’ny hafa” ary
“Tazàno ny làlana, hetseho mafy ny herinao”.
Ny SAF/FJKM dia iraky ny Fiangonana hanehoany ny finoany eo amin’ny sehatry ny fampivelarana ny fiarahamonina sy ny toekarena ary miasa ho amin’ny ezaka rehetra ho fampandrosoana ny olona rehetra sy ny Olona manontolo.
‘Ny Olona, izay sady mpisehatra no ivon’ny asa fampandrosoana dia maneho ny endrik’Andriamanitra ary miaina anaty fiaraha-monina mirindra sy milamina ary tompon’andraikitra
Ny SAF/FJKM dia Fikambanana tsy miankina amin’ny Fanjakana (ONG) fehezin’ny lalàna 96-030
Noharian’Andriamanitra tahaka ny endriny ny olombelona. Manana adidy hiady amin’izay rehetra manimba izany endrik’Andriamanitra izany ny Fiangonana amin’ny alalan’ny asa fampandrosoana tanterahany. (Gen.1/27)
Noharian’Andriamanitra hitandrina sy hiasa ny zava-boahary ny olona. An’ Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy. Koa andraikitry ny Fiangonana araka izany ny mikajy sy mitantana izany mba ahatonga ny olombelona rehetra hisitraka izany. (Gen.2/15)
Mitovy ny olona rehetra eo anatrehan’Andriamanitra. Tsy misy tombo sy hala. Koa ny fanomezam-pahasoavana nomena ny Fiangonana amin’ny alalan’ny
SAF/FJKM dia hampiasaina hanasoavana ny olona rehetra tsy misy ankanavaka. (Rom.10/12 )
Fampianarana itarihan’i Jesoa Kristy ny Fiangonana ny hampanjaka ny fahamarinana sy Fitiavana. Izay Fitiavana izay no manery ny Fiangonana hihevitra ny Mpiara-belona ka tsy ho tia ny tenany ihany fa ho tia ny hafa koa mba ho vonjena izy.( IKor ;10/33)
Ny olombelona feno no novonjen’Andriamanitra teo amin’ny hazofijaliana. Jesoa Kristy mantsy dia sady nitory ny fiainana mandrakizay no nanasitrana ny marary sy nanafaka ny ampahoriana koa. Nanome hanina ny noana ary nampianatra sy nitarika ny olona ho amin’ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany. Andraikitry ny olona mino ihany koa izany ny hanafaka ny namany,
Araka izany dia nisaloran’ny SAF/FJKM ny Teny Faneva hoe “Mitady ny mahasoa ny maro” (I.Kor.10/33)
IREO FANDAHARANASA IFANTOHANY
Nanomboka ny taona 1975
Manana sakafo maharitra sy ampy ary ara-pahasalamana amin’ny fotoana rehetra ilainy azy ny olona tsirairay tsy ankanavaka.
RANO FISOTRO MADIO – FANADIOVANA – FIDIOVANA
Nanomboka ny taona 1986
Misotro rano madio sy miaina lalandava ary tanteraka anaty tontolo madio ny olona tsirairay, indrindra ny zaza amam-behivavy.
Nanomboka ny taona 1986.
Fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka amin’ny alalan’ny fanaraha-maso ireo aretina mateti-pitranga, sy fanabeazana ara-pahasalamana.
Fitaizam-pahasalamana mitohy sy maharitra.
Natomboka ny taona 1988.
Fampihenana ny tsindry amin’ny harena voajanahary.
FITANTANANA NY TANDINDON-DOZA SY FIATREHANA NY LOZA VOAJANAHARY
Nanomboka ny taona 1990.
Ampy ny fahaiza-manaon’ny olona tsirairay, ny fiaraha-monina sy ny mpitondra fanjakana hitantana ny tandindon-doza sy hiatrika ny voka-dratsy haterany, ka hampaharitra ny asa fampandrosoana eny ifotony.
Nanomboka ny taona 2014
Hanampy ny fiarahamonina amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary mba hanalefaka ny fiantraikan’ny loza.
Maherin’ny 10000 ireo Volontera FJKM nahazo fiofanana , ary miparitaka sy miasa manerana ny Synodamparitany 13 eto Madagasikara.
Nanomboka ny taona 2016
Hampiroboroboana sy ny hampivelarana ny iraka feno nomena ny Fiangonana, izay mikendry indrindra ny :
Fampandraisana andraikitra ny Fiangonana hitondra fanovana eo anivon’ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny Teny sy ny fijoroana vavolombelona
Fampiharana mivantana ny iraka ampanaovina ny Fiangonana amin’ny alalan’ny asa miaraka amin’ny fiaraha-monina
Fampiraisana ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny fitoriana ny filazantsara
Fampandrosoana ny Fiangonana .
Anisan’ny Fikambanana Malagasy hany misehatra manerana ny Nosy ny SAF/FJKM, sady nisafidy ny hiasa amin’ny sehatra marolafy (développement intégré). Nisedra sy Niaina ireo fiovana sy fivoarana nentin’ny fanatontoloana ny SAF/FJKM ary nandalo zava-tsarotra maro samihafa.
Fa anisan’ny nanampy teo amin’ny fivelarana sy fanohizana ny asa notanterahina ny fanoloran’ny FJKM ireo toerana sy fananana mba hahazoan’ny SAF/FJKM mamita ny iraka nampanaovina azy.
Miara miasa amin’ny fiarahamonina , fikambanana , sy ireo Vondron’olona Ifotony
Miara miasa amin’ny Fiangonana, sampana, sampan’asa ary asa sy ireo hery velona rehetra misy ao aminy
Miara miasa ihany koa amin’ireo mpiara miombon’antoka eto an-toerana sy avy any ivelany
Miara-miasa amin’ireo tambazotra mifandraika amin’ny fotokevitra ijoroan’ny SAF/FJKM.